वास्तविक किसानलाई अनुदान नदिएर सधै कागजी प्रक्रियामा मात्रै अनुदान वितरण कहिलेसम्म ? - krishipost.com
वास्तविक किसानलाई अनुदान नदिएर सधै कागजी प्रक्रियामा मात्रै अनुदान वितरण कहिलेसम्म ?
२० मंसिर, बुटवल ।
साना किसानलाई उकास्ने र व्यावसायिक कृषि बढाउने उद्देश्यले लुम्बिनी सरकारले २०७६ मा किसानका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम ल्यायो । कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यविधि बनायो । सरकार र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रम ल्याएको दुई वर्ष पुग्दासम्म एक जना किसानले पनि अनुदान लगेका छैनन् । अनुदान पाइने आशमा प्रदेश सरकारका संरचना र बैंकहरू धाउँदा किसान भने दिक्क छन् ।
सहजीकरण पनि नहुने र किसानले स्पष्ट योजना ल्याउन पनि नसकेकै कारण ऋण प्रवाहमा समस्या भएको कृषि विकास बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख राजेशकुमार श्रीवास्तवले बताए । ‘सरकारी अनुदान नै भए पनि बैंकले धितो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश किसान ऋण पाइन्छ भनेर आए पनि स्पष्ट योजना र धितोबिना आएकाले ऋण प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिएको हो ।’ यद्यपि, ७२ जना किसानलाई अनुदानमा ऋण दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको श्रीवास्तवले बताए । साभार : कान्तिपुर